Xasan oo ka hadlay qaraxii Nairobi
8 Dec 8, 2012 - 4:59:52 AM
Madaxweynaha Somalia Xasan Sh. Maxamuud ayaa dib maanta 08 December,2012 ugu soo laabtay Muqdisho kadib markii uu booqasho dhowr casho ah ku tagay dalka Turkiga, isagoo markii uu ka dagay garoonka Muqdisho cambaareeyay Qaraxii xalay ka dhacay Nairobi.
Xasan Shiikh ayaa qaraxaas ku tilmaamay mid fool xun, wuxuuna sheegay inaysan Islaamnimada iyo Soomaalinimada ku jirin in dad cibaadeysanaya la weeraro, isagoo sheegay in Dowladiisu ay gacan ka siinayso Kenya sidii ay uga hortagi lahayd kuwa falalkaas geysanaya.
"Qaraxii ka dhacay Nairobi wuxuu ahaa mid fool xun, waxaana lagu ku dhintay kuna dhawacmay dad cibaadeysanaya oo Alle baryay, mana ahan wax Islaamnimada ku jirta" ayuu yiri Xasan Shiikh oo tacsi u diray Ehelada dadkii ay waxyeeladu gaartay iyo Dowlada Kenya.
Madaxweynaha Somalia wuxuu si gaar ah uga hadlay Dhaawaca Xidhibaan Yuusuf Xasan isagoo ku tilmaamay wax laga xumaado, wuxuuna sheegay in xildhibaanku uu ahaa mid jecel Somalida, isla markaana caawiya.
"Sababta loo weeraro Kenya waa maxaad u caawinaysaan Somalia, runtiina inagu waa mid aan aad uga xunahay in la beegsado dadka masaakiin ah oo Alle tuugaya" ayuu Madaxweynaha Somalia ku sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay Muqdisho.
Madaxweyne Xasan wuxuu sheegay in Kenya ay gacan ka siinayso Dowlada iyo Shacabka Somalia sidii ay dib ugu soo ceshan lahaayeen Nabadooda, taasna uu ku amaanayo shacabka iyo dowlada Kenya, isagoo labada shacab ugu baaqay inay ka hortagaan kuwa doonaya inay Amaanka wax u dhimaan.
Xalay ayaa Masaajid ku yaala Magaalada Nairobi gaar ahaan Xaafada Islii waxaa ka dhacay Qarax loo malayenayo bambaano waxaana ku dhintay sadex qof iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 10 ruux oo uu ku jiro Xildhibaan Yuusuf Xasan oo laga soo doorto Degmada Kamakunji oo Islii ay ka tirsan tahay.
Ma jirto cid sheegatay inay Ma'suul ka tahay weerarkaas, waxaana weerarkan uu noqonayaa kii labaad oo muddo sadex maamood gudahadood ah ka dhaca Nairobi, balse Booliiska Kenya ayaa sheegay in weerarkan uu yahay mid ka duwan kuwii ka dhici jiray Nairobi.